By Htet Wai Aung - May 23, 2021
မိုးဗြဲမြို့ ရဲစခန်းကို PDF တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ပြီး စစ်သား ၂၀ ခန့်သေဆုံး၊ ၄ ဦး အရှင်ဖမ်းဆီးရမိ၊ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦးကျဆုံး
ကွတ်ခိုင်မြို့အနီးတွင် ယမန်နေ့ညက လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့
မိုးဗြဲမြို့တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့် စစ်တပ် တိုက်ပွဲပြင်းထန်၊ နေအိမ်အချို့ လက်နက်ကြီး ကျရောက်ပေါက်ကွဲ
မူဆယ်မြို့မှာ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်နဲ့ စစ်တပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ကနီမြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်က ယာဥ်တစီး မိုင်းဆွဲခံရ
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဒေါတဝီဂိတ်ကို PDF နှင့်အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ဟု Free Burma Ranger ပြော
ဟုမ္မလင်း၊ ချင်းတွင်းတံတားရဲကင်း PDF ကတိုက်ခိုက်လို့ ရဲတဦးသေ၊ စစ်သားတဦး စိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရ
ရှမ်း - ကယားနယ်စပ် ပီကင်းကောခူဂိတ်တွင် PDF နှင့် စစ်တပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
မိုးဗြဲမြို့၊ စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ နေအိမ်အချို့ပျက်စီး၊ ပြည်သူတဦး ကျည်ထိ
ဒီးမော့ဆို ဒေါ့ဝတီဂိတ်ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သည့် ဗီဒီယိုဖိုင် Free Burma Ranger ထုတ်ပြန်
မူဆယ်တွင် ယနေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် နေအိမ်အချို့နှင့် ကားများပျက်စီး
မူဆယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတခုကို KIA တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်
ခန္တီးမြို့နယ်က စစ်တပ်စခန်း ၄ ခုနဲ့ ရဲစခန်း ၁ ခုကို KIA တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီး
မိုးဗြဲမြို့ကို စစ်ကူတက်လာသည့် စစ်ကောင်စီတပ်အား PDF ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ငွေတေင်ဆည်အနီး အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးများနဲ့ ပစ်ခတ်နေ
ပုသိမ်မြို့၊ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့
မြစ်ကြီးနား၊ နောင်နန်းကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မီးလောင်
တောင်ကြီးမြို့တွင် ယမန်နေ့ညက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်
ဖားကန့်မြို့ စုပေါင်းရုံးအနီးတွင် မိုင်းပေါက်ကွဲမှု ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွား
မန္တလေး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့မရဲစခန်းမှာ ဗုံးပေါကွဲပြီး ပစ်ခတ်မှူများဖြစ်ပွား
မိုးဗြဲမြို့ ရဲစခန်းနှင့် ထွေအုပ်ရုံး မီးလောင်ပြာကျ
မိုးကုတ်မြို့ အထကကျောင်းအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး စစ်သား ၁ ဦးသေ၊ ၁ ဦးဒဏ်ရာရ
ထန်းတပင်မြို့နယ်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်ချက်ဟု PDF ထုတ်ပြန်
လွိုင်ကော်မြို့တွင် စစ်သားများညကင်းလှည့်ချိန် နေရာအနှံ့ ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွား
မြဝတီမြို့၊ ကြံ့ဖွ့ပါတီဝင် လူမှုဝန်ကြီးဟောင်းနေအိမ်ရှေ့ လက်လုပ်မှိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
NUG အစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အလံတော်နှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်
ဟားခါးတွင် ဘူဒိုဇာတစ်စီး မီးလောင်မှု PDF လက်ချက်မဟုတ်ဟု ပြော
မူဆယ်မြို့နယ် CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၄၂၈ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
CDM လှုပ်ရှားမှုပါဝင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများကို စစ်ကောင်စီလက်ကိုင်တုတ် ပျူစောထီးအဖွဲ့ ခြိမ်းခြောက်
NUG အစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ကျောင်းသားများကို စာသင်ပေးမည်ဟု မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်က CDM ဆရာ/မများပြော
ဂန့်ဂေါမြို့နယ် CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၉၀၀ ကျော် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
CDM ဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်း ၁၂၅,၀၀၀ တာဝန်ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရဟု ဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ဆို
ပြည်မြို့မှာ စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ လူငယ်တဦး သုံးရက်အကြာတွင် သေဆုံး
လားရှိုးမြို့မစျေး မီးရှို့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် ဆိုင်ပိုင်ရှင်များ စိုးရိမ်နေပြီး ပစ္စည်းများ အိမ်ပြန်သယ်နေ
ဟုမ္မလင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦး အပါအဝင် ၁၂ ဦးကို ပျူစောထီးအဖွဲ့ ခြိမ်းခြောက်စာပို့
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားသည့် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် လုယက်မှုပိုများလာ
ကန့်ဘလူမြို့နယ် ရီးဒွေးကျေးရွာကို စစ်ကောင်စီတပ်များ လာရောက်တပ်စွဲထား
ယင်းမာပင်မြို့နယ်က နေအိမ်အချို့ကို စစ်သားများ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး
မိုးကုတ်မြို့နယ်က ပြည်သူ ၅ ဦးကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွား
မန္တလေးစျေးချိုတော်က စျေးမရောင်းသည့် ဆိုင်ခန်းများ ပိတ်သိမ်းမည်ဟု စစ်ကောင်စီ ခြိမ်းခြောက်
လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် နေအိမ်များကို စစ်တပ်က လေးခွဖြင့်ပစ်ခတ်သောင်းကျန်း
အင်းစိန် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကို စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး ၃ ဦး အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးခံရ
တောင်ငူတွင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်ခဲ့
မင်းတပ်မြို့တွင် ပြည်သူပိုင်နေအိမ်နှင့် ဆိုင်များကို စစ်သားများဖောက်ထွင်းခိုးယူ
မိုးကောင်းတွင် ဆန္ဒပြပွဲပါဝင်သည့် သားဖြစ်သူကိုမမိ၍ မိခင်ဖြစ်သူကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ကနီမြို့နယ် မြောင်းကုန်းရွာမှာ စစ်သားများက ပြည်သူ့စားနပ်ရိက္ခာများ အဓမ္မလုယူ
ကသာမြို့နယ် အစုကြီးကျေးရွာမှာ ပြည်သူ ၈ ဦးကို စစ်တပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
ဘော်လခဲမြို့တွင် ငါးမျှားပြန်လာသူကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်
တာချီလိတ်မြို့တွင် ယမန်နေ့ညက လူငယ် ၇ နှင့်အထက်ကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို မကြာမီ ရုံးတင်စစ်ဆေးမည်ဟု မင်းအောင်လှိုင်ပြော
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေး လုပ်ဆောင်သွားနည်ဟု US သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြော
NLD ပါတီဖျက်သိမ်းမည်ဟု ရွေးကော်ပြောဆိုမှု EU သတိပေး
သီပေါမြို့နယ်က စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ ၃၅၀ ကျော် ရေ၊ မီး အခက်ကြုံနေ
အောင်မြေသာစံမြို့နယ်က စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု မီးလောင်ကျွမ်း
မြောက်ဥက္ကလာတွင် ရာအိမ်မှူးတစ်ဦး ဓားထိုးခံရ၊ ဓားထိုးသူမမိ၍ ဖခင်နဲ့ ညီဖြစ်သူကို စစ်တပ်က ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး
KIA ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ယုဇနကုမ္ပဏီဝင်းထဲ သံတိုသံစသွားကောက်သည့် ပြည်သူ ၆၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရ
တန့်ဆည်မြို့တွင် စစ်ကောင်စီသတင်းပေး လင်မယားပစ်ခတ်ခံရပြီး အမျိုးသားသေဆုံး
ဂျပန်၊ တိုကျိုသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြမြန်မာများနဲ့ ရဲများ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်
နမ္မတီးတွင် လူနေအိမ်များကို အကြမ်းဖက်စစ်သားများ လိုက်လံစစ်ဆေးနေ
ဝိုင်းမော်မြို့က ကျောင်းဖွင့်ရန်စီစဥ်နေသည့် မန်ဒေါင်ရွာ စာသင်ကျောင်း လေပြင်းတိုက်ခတ်သောကြောင့် ပျက်စီး
စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုများကြားက နိုင်ငံအဝှမ်း အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးနှင့် စစ်ကျွန်ပညာရေးစနစ် အလိုမရှိကြောင်း ဆန္ဒပြ
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်၏ လူမဆန်မှုများကြောင့် ကျဆုံးသူ ၈၁၂ ဦး နှင့် ဖမ်းဆီခံရသူ ၅၃၅၄ ဦးရှိ
ဝာရုတ်မာရသွန်ပြေးပွဲ ရာသီဥတုကြောင့် အပြေးသမား၂၀သေ
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်က လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမှသည် မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာနိုင်
လွိုင်ကော်၊ ကယန်းသာယာရွာဘုရားကျောင်းကို စစ်တပ်ကအမြောက်နဲ့ပစ်ခတ်လို့ ပြည်သူ ၄ ဦးသေဆုံးပြီး ၈ ဦးဒဏ်ရာရ
လွိုင်ကော်တွင် စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးများ စက်သေနတ်များနဲ့ပစ်ခတ်နေ၊ ပြည်သူအများအပြားပိတ်မိ
ကယားပြည်နယ် မော်ချီးမြို့အနီးတွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်တပ် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေ
ကယားပြည်နယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်များဖက်က ပအို့ဝ် PNO ပြည်သူ့စစ်များ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ပေး
ဖယ်ခုံနဲ့ မိုးဗြဲမြို့များတွင် PDF နှင့် စစ်တပ်တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံများတိမ်းရှောင်နေရ
ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကကျောက်စိမ်းတင်လာသည့်စက်လှေကို ရှမ်းနီတပ် SNA တိုက်ခိုက်၊ စစ်သားများဒဏ်ရာရ
ထားဝယ်၊ တောင်ပျောက်တိုက်နယ်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဒေသခံများပျောက်ကျားနည်းနှင့် သွားရောက်တိုက်ခိုက်
မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ရှိ RCSS/SSA တပ်စခန်းအချို့ကို SSPP/SSA တိုက်ခိုက်သိမ်းယူ
မိုးမောက် မိုက်ကရိုဝေ့တောင်ခြေရှိရွာတွင် စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချထား
လှိုင်မြို့နယ်၊ ၁၀ ရပ်ကွက်က အုပ်ချုပ်ရေးမှုး၏ ဆိုင်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ကလေးမြို့ အထက(၆) ကျောင်းမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး စစ်သား ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ၊ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုများရှိ
မအူပင်မြို့ အထက(၁)နှင့် စည်ပင်ရုံးရှေ့တွင် ယမန်နေ့ညက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွား
ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ ၆ ရွာတွင် ယမန်နေ့ညက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့
တောင်တွင်းကြီးမြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်အနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ဗန်းမော်မြို့တွင် လျှပ်စစ်ရုံးနှင့် ပညာရေးမှူးရုံး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွား
အလုံမြို့နယ်၊ အထက(၄) မှာ ကျောင်းအပ်နှံရေး ဒုညွှန်မှူးလာရောက်စည်းဝေးစဉ် ဗုံးပေါက်ကွဲ
ကျောင်းအပ်လက်ခံသည့်နေ့ အထက(၁) ရေစကြိုကျောင်းအုပ်ကြီးနေအိမ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
PDF . NUG . CDM
ကရင်နီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်က Non CDM ရုံးများနဲ့ ဒလန်အိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး
အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သပိတ်မှောက်ကြဖို့ ပြည်သူများကို NUG အစိုးရတိုက်တွန်း
CDM ဝန်ထမ်းများအပေါ်ဖိအားပေးနေသည့် ဌာနများနှင့် ဒလန်များကို မအူပင် PDF သတိပေးချက်ထုတ်
ဆေးရုံအုပ်နှင့် စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ခြိမ်းခြောက်လို့ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံက CDM ဝန်ထမ်းများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
ကရင်နီပြည်သူများနှင့်အတူ ရပ်တည်ကြောင်း မင်းတပ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် CDF ထုတ်ပြန်
တာချီလိတ်တွင် Non CDM ဆရာမနှစ်ဦးကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
သဲကုန်းမြို့ မီးသတ်ဌာနက CDM ဝန်ထမ်းကိုမမိသဖြင့် မိသားစုဝင်များကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ရေးမြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၆၀၀ ကျော် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်က CDM ပါမောက္ခတဦး အပါအဝင် ၃၈ ဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၄၅၆ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
လွိုင်ကော်၊ နိုးကိုးနှင့်ရေယို လမ်းပေါ်တွင် စစ်တပ်က ပြည်သူတဦးကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီး ပစ်သတ်
ယမန်နေ့က မြောက်ဒဂုံရှိ ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်းကို စစ်တပ်က အရပ်ဝတ်နဲ့ လာရောက်ပစ်ခတ်၊ လူငယ်တဦးကျဆုံး
ကသာမြို့ ဒုရဲအုပ်တဦးအသတ်ခံပြီး တလအကြာတွင် ပြည်သူ ၈ ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ဓာတ်အားခွဲရုံအတွင်းရှိ မူလတန်းကျောင်း စစ်တပ်ဝင်လာပြီးနောက် မီးလောင်
ကယားပြည်နယ် ကုန်းသာရွာသားတစ်ဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်
ကနီမြို့နယ်၊ မြောင်းကုန်းကျေးရွာက ရွာသားတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်သားများ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်
ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်တွင် စစ်တပ်ကပစ်ခတ်သည့် လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီး ကလေးငယ်တဦး သေဆုံး
ပူတာအိုတွင် အကြမ်းဖက်စစ်သားများက ကားဖြင့်ဝင်တိုက်လို့ လူငယ်တဦးသေဆုံး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေပြည်တော်တွင် ရုံးထုတ်စစ်ဆေး၊ ပြည်သူရှိသရွေ့ ပါတီရှိနေမည်ဟုပြော
လွိုင်ကော်၊ ပန်ကန်းဂိတ်ကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေး၊ ဒလန်နေအိမ်များ ဖျက်ဆီးခံရ
ညောင်လေးပင်ခရိုင် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မှာ KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
နိုင်ငံတဝှမ်း စာသင်ကျောင်းများပြန်ဖွင့်သော်လည်း စစ်ကျွန်ပညာရေးအောက် ကျောင်းအပ်သူနည်းပါး
ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်က ဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးရုံး မီးလောင်
ကလောမြို့နယ်၊ ဘော်ဆိုင်းဒေသရဲကင်းကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စွန့်ခွာထွက်ပြေး
စစ်ကောင်စီကို နိုင်ငံတကာတရားရုံးများတွင် တရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီးပြော
ယင်းမာပင်မြို့နယ်နှင့် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်က ကျေးရွာများစုပေါင်းပြီး ဆန္ဒပြပွဲနှင့် ကျဆုံးသူကဗျာဆရာ ကေဇဝင်းအတွက် ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်
နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်အမှု လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည့် ရှေ့နေကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ကယားပြည်နယ် KySDP ပါတီဒုဥက္ကဌ ကွယ်လွန်၊ တိုက်ပွဲများအကြား ဈာပနပြုလုပ်
မန္တလေး - မူဆယ် အဝေးပြေးလမ်းပေါ်တွင် ယမန်နေ့ညက ကားနှစ်စီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ
ရှမ်းပြည်နယ် ကျောက်မဲမြို့ရှိ စူဠာမဏိစေတီတော် မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး ထီးတော်မြေခ
စစ်ကောင်စီကခြိမ်းခြောက်လို့ မန္တလေးဈေးချိုရှိ ဆိုင်ခန်းများပြန်ဖွင့်ရသော်လည်း ဝယ်ယူသူကင်းမဲ့နေ
ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်တဲ့ DKBA နှင့် KNU/KNLA(PC) ကို စစ်ကောင်စီက ဆန်နှင့် ရိက္ခာများထောက်ပံ့
ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ဇီးတောရွာက နေအိမ်နှင့် ပစ္စည်းများကို အကြမ်းဖက်စစ်သားများ လာရောက်ဖျက်ဆီး
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင် မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေ
မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးရေး ကိုရီးယားရောက်မြန်မာများနှင့် ကိုရီးယားပြည်သူများ ဒယ်ဂူးမြို့မှာဆန္ဒပြ
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် သစ်ပင်လဲကျပြီး ကားတစ်စင်းပျက်စီး
ပြည်သူများထိခိုက်မည့်အလုပ် မလုပ်ဆောင်ဟု မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်
စစ်အာဏာရှင်ကို ရရာလက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်သင့်ပြီဟု ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းပြော
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင် အကြမ်းဖက်စစ်သားများ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတဦးသေဆုံး
မြန်မာနိုင်ငံက အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရေး ကူညီပေးမည်ဟု EU ကုန်သည်များအသင်းပြော
လွိုင်ကော် ကတ်သလစ်ဘုရားကျောင်းအနီး မည်သည့်လက်နက်ကိုင်မှ ပစ်ခတ်ခြင်းမပြုရန် အလံဖြူထောင်ပြီး မေတ္တာရပ်ခံ
စကစကို နိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာတရားစွဲဖို့ ၈၀%ပြီးစီးလို့NUGဒုဝန်ကြီးပြော
ချက်သမ္မတနိုင်ငံက NUGအစိုးရအား အသိအမှတ်ပြု
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်က CDM ဆရာ/မ ၁၅၅ ဦး ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရ
မိုးညှင်းတက္ကသိုလ်က CDM အရာထမ်း ၁၀၇ ဦးနှင့် အမှုထမ်း ၃၉ ဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်က ပါချုပ်၊ ဒုပါချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ရာထူးမှရပ်ဆိုင်းကြောင်း တက္ကသိုလ်ယီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ကြေညာ
ဒီးမော့ဆိုမြို့တွင် ယနေ့နံနက် ၄ နာရီအချိန်ကစပြီး KPDF တပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်တပ် တိုက်ပွဲပြင်းထန်
ဒီးမော့ဆိုမြို့တိုက်ပွဲတွင် နှစ်ဖက်အကျဆုံးရှိကြောင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် ထုတ်ပြန်၊
ဒီးမော့ဆိုမြို့ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က တာဝေးပစ်လက်နက်ကြီးများနှင့် ပစ်ခတ်နေ
ဒီးမော့ဆိုမှ ငွေတောင်သို့ စစ်ကူသွားသည့် အကြမ်းဖက်စစ်သားများ တင့်ကားနှစ်စီး မိုင်းဆွဲခံရပြီး ဆုတ်ခွာ
စစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်များထိမှန်ပြီး ဒီးမော့ဆိုမြို့က နေအိမ်များ ပျက်စီး
ကယားပြည်နယ် မော်ချီးဒေသတွင် စစ်တပ်က လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်မည်ကို စိုးရိမ်နေရပြီး ဒေသခံများ ဗုံးခိုကျင်းတူးနေရ
စစ်ကိုင်း၊ အမှတ် ၁၆ ရဲတပ်ရင်းမှာ ရဲတပ်သားက ဒုရဲမှူးကို သေနတ်နဲ့ အချက် ၂၀ ပစ်သတ်
KNLA တပ်မဟာ ၅ နှင့် ၃ ပူးပေါင်းပြီး စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်၊ စစ်သား ၃ ဦးသေပြီး ၉ ဦးဒဏ်ရာရ
မင်းတပ်တွင် စစ်တပ်က ဓာတုလက်နက်သုံးပြီး တိုက်ခိုက်နေဟု CDF ပြော၊ တိုက်ပွဲအတွင်း စစ်သား ၁ ဦးထပ်မံသေဆုံး
ဖာပွန်တွင် KNU နှင့် BGF တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား၊ BGF စစ်ကြောင်းမှူး စနိုက်ပါနှင့် ပစ်ခတ်ခံရပြီး သေဆုံး
မိုးမောက်မြို့နယ်တွင် စစ်တပ်နှင့် KIA, AA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
မိုးမောက်အခြေစိုက်တပ်စခန်းများမှ တောင်တန်းဖက်သို့ လက်နက်ကြီးများနဲ့ ပစ်ခတ်နေ
နမ္မတူမြို့နယ်တွင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနှင့် RCSS တိုက်ပွဲများကြောင့် ကျေးရွာငါးရွာမှ နေအိမ် ၁၂၀ ကျော်ပျက်စီး
ကနီမြို့၊ ချင်းတွင်းမြစ်ကိုဆန်တက်လာသည့် စစ်ရေယာဥ်များ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရ
ကနီမြို့နယ် လက်ပံစုကျေးရွာအနီးတွင် စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ ရွာသားများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားလမ်း၊ ဟိုပင်မြို့အဝင်က ဝက်ကုန်းတံတား မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရ၊ လူ ၂ ဦးသေဆုံး
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်မြို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၃ ကြိမ်နှင့် လောင်းလုံမြို့တွင် ၃ ကြိမ်ထက်နည်းဖြစ်ပွား
သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် မင်္ဂလာဆောင်တွက် လက်ဖွဲ့ထုတ်ထဲက ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး သတို့သမီးအပါအဝင် ၃ ဦးသေဆုံး၊ ၈ ဦးဒဏ်ရာရ
မကွေးမြို့တွင် ယမန်နေ့ညက စစ်ကောင်စီတပ်စွဲထားသည့် အထကကျောင်းအပါအဝင် ဗုံး ၈ လုံး ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
တောင်တွင်းကြီးမြို့တွင် ယမန်နေ့က ရဲဝန်ထမ်းအိမ်ရာအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
မိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်း ဘောလုံးကွင်းအနီးမှာ ယမန်နေ့ညက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ပုသိမ်မြို့တွင် EPC ရုံး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး ဒဏ်ရာရသူများရှိ
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးအနီးရှိ လျှပ်စစ်မီတာရုံးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ကလေးမြို့ အမှတ် ၁၃ အထကကျောင်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ဝက်လက်မြို့နယ် မင်းရွာရှိ အလက(ခွဲ) စာသင်ကျောင်းတွင် ဗုံး ၃ လုံးပေါက်ကွဲ
နတ်မောက်မြို့ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ဗန်းမော်မြို့ လျှပ်စစ်မီတာရုံးနှင့် ပညာရေးမှူးရုံးတွင် ယမန်နေ့က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်မြို့သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်ဝေဇယန္တာလမ်းမပေါ်ရှိ KIA Car Showroom ရှေ့တွင် ယနေ့ ညနေ ၆ နာရီခန့်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကားပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသည့် လူ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
တနိုင်းမြို့က လူငယ်တစ်ဦးကို စစ်ဆေးစရာရှိသည်ဟုဆိုကာ အကြမ်းဖက်စစ်သားများ ဖမ်းဆီးသွား
ကလေးမြို့တွင် ယမန်နေ့က စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားသူတစ်ဦး ယနေ့အလောင်းလာယူခိုင်း
ပဲခူး၊ စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်လို့ ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီး သန်းလှိုင်၏ညီဖြစ်သူ နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားဟောင်း ကိုစိုးမိုးလှိုင် စစ်ကြောရေးစခန်းတွင် ကျဆုံး
သာကေတမြို့နယ် ထွေအုပ်ရုံးအနီးတွင် စစ်တပ်က ရာအိမ်မှူး၏သားဖြစ်သူကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်
မနက်၅နာရီခန့်က ရန်ကုန်သာကေတတွင် စိတ်မူမမှန် အတက်ရောဂါရှိသူကို ထွေအုပ်ရုံးစောင့်တပ်က ပစ်သတ်
မိုးကုတ်မြို့ အနောက်ပိုင်း Defense Team မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ဖားကန့်တွင် ကျေးရွာလုံခြုံရေးကင်းစောင့်နေသည့် လူငယ် ၇ ဦးကို စစ်တပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
ဖားကန်မြို့နယ် မမုံရွာသား ၁၀ ဦးထက်မနည်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွား
ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူအုပ်စု စပေါ့ကျေးရွာတွင် လူတစ်ဦး သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခံရ
ဝါးခယ်မမြို့၊ မေ ၂၃ ရက်ကတည်းက စစ်သားများဖမ်းဆီးသွားသည့် အမျိုးသား ၃ ဦး မိသားစုဝင်များနဲ့ အဆက်သွယ်မရသေး
ဖားကန့်တွင် KIA နှင့်ပတ်သက်သည့် အလံများ ပိုစတာများကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒမပြရန် စစ်ကောင်စီ ခြိမ်းခြောက်
မြစ်ကြီးနားမြို့ မြဝတီဘဏ်အနီးက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နေအိမ် တပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး မီးလောင်ပျက်စီး
Frontier Myanmar အယ်ဒီတာဖြစ်သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသားကို ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးပြီး အင်းစိန်ထောင်ပို့
စစ်ကောင်စီက စာသင်ကျောင်းများပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့ ကျောင်းသားမိဘများကို လုံခြုံရေးယူခိုင်း
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ ဆောင်းပြောင်းရွာက ရဲစခန်းမီးလောင်ပြီး ရဲများထွက်ပြေး
တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွင် ကုန်ကားများထောင်နှင့်ချီပြီး ပိတ်မိနေ
စလင်းမြို့နယ်တွင် စစ်ကျွန်ပညာရေးစနစ် ဆန့်ကျင်သူရွာသားများကို စစ်ကောင်စီခန့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ခြိမ်းခြောက်
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရေကာတာစီမံကိန်းများ အပြီးအပိုင်ဖျက်သိမ်းရေး ဒေသခံများ ဆန္ဒပြ
ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်တွင် တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုများကြောင့် ဒေသခံများ စားဝတ်နေရေး အခက်ကြုံ
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် KNU နယ်မြေများကို စစ်တပ်က ကင်းထောက်ဒရုန်းများနှင့် ထောက်လှမ်းနေ
ရဲစခန်းများအတိုက်ခံရ၍ ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီး လွိုင်ကော်ရောက်နေ
မော်လမြိုင်တွင် ခြိမ်းခြောက်၍ မီတာခကောက်ခံ
ထားဝယ်ခရိုင်၊ လောင်းလုံမြို့နယ် ကမြောကင် အထကကျောင်း ယမန်နေ့ညက မီးလာင်ကျွမ်း
မန္တလေး၊ ၈၂ လမ်းနေ ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ သားမိနှစ်ဦး နေအိမ်တွင် အနုကြမ်းစီး အသတ်ခံထားရ
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်၏ လူမဆန်မှုများကြောင့် ကျဆုံးသူ ၈၂၄ ဦး နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၄၀၈ ဦးရှိ
တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်ကောင်စီက သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ကလေးသူငယ် ၇၃ ဦးရှိဟု NUG အစိုးရထုတ်ပြန်
NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ ထုတ်ပြန်
ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်က ဝန်ထမ်းချေးငွေနှစ်လစာကို ပြန်ဆပ်စရာမလိုဟု NUG အစိုးရကြေညာ
ပြည်သူများ ဆေးဝါးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာများ ကြိုတင်စုဆောင်းထားကြရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး သတိပေး
နိုင်ငံတကာပါလီမန်များညီလာခံ IPU ကို CRPH ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးအောင်ကြည်ညွန့် တက်ရောက်
ကယားပြည်နယ်က စစ်ရှောင်စခန်း ၄ ခုကို မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းက အရေးပေါ်ကူညီ
ဒီးမော့ဆိုမြို့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က စနိုက်ပါနှင့်ပစ်ခတ်လို့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတဦး သေဆုံး
ဒီးမော့ဆိုမြို့တွင် ပြည်သူနှစ်ဦးကို စစ်တပ်ကသေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်လို့ တစ်ဦးသေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရာသူကို KPDF ကယ်ထုတ်
ကယားပြည်နယ်တွင် စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် တစ်သောင်းကျော်ရှိပြီး ဆေးဝါးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာများ အရေးပေါ်လိုအပ်နေ
ကွတ်ခိုင်အနီး ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်တွင် KIA နှင့် စစ်တပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ နမ်းမားမြို့ အမှတ် ၃၆၇ အမြောက်တပ်မှ KIA စခန်းရှိရာဖက်သို့ လက်နက်ကြီးနှင့်ပစ်ခတ်
KNU တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေကို BGF နဲ့ စစ်တပ် အင်အားတိုးချဲ့ပို့ဆောင်နေပြီး၊ မတ်လအတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့
ရှမ်း - ကယားနယ်စပ်ရှိ ထီးစဲခါးရွာရဲစခန်းကို KNPP နှင့် KPDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်
စစ်ကိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ် ချောင်းဇင်းရွာမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့် စစ်တပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
လွိုင်လင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ စစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်၊ ရှမ်း - ကယားနယ်စပ်ဂိတ်ကို သိမ်းပိုက်ထား
ရှမ်း - ကယားနယ်စပ် KPDF နှင့် စစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး လွိုင်လင်လေးရဲစခန်း မီးလောင်ပြာကျ
ကနီမြို့နယ်၊ ချင်းတွင်းမြစ်တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီဖက်မှအကျအဆုံးရှိကြီး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မှ တစ်ဦးကျဆုံး
CDM ဝန်ထမ်းများနေရာတွင် အစားထိုးလုပ်ကိုင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများကို အရေးယူသွားမည်ဟု CNDF သတိပေး
စီမံ/ဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနရှိ အရာထမ်း ၁၁၁ ဦး ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရ
မအူပင်တက္ကသိုလ်က CDM ဆရာ/မ ၁၃၇ ဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
မိုးကောင်းမြို့နယ်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်း ၁၈ ဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ CDM ဆရာ/ဆရာမ ၃၃၈ဦးကို စကစအလုပ်ဖြုတ်
ကနီတွင် စစ်တပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနေလို့ ကျေးရွာ ၃၅ ရွာမှ ပြည်သူတစ်သောင်းကျော် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
ဆားတောင်မြို့မှာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တပါးကို စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ပြီး လိုက်လံဖမ်းဆီး
ဖားကန့်မြို့က အလွတ်တမ်းသတင်းထောက်တဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ဖမ်းဆီး
ဖားကန့်မြို့နယ်၊ လုံခင်းကျေးရွာညသပိတ် NLD သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ အပါအဝင် ၂ ဦးဖမ်းဆီးခံရ
ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ဆင်ဆိပ်ကလေးကျေးရွာကို အကြမ်းဖက်စစ်သားများက နေအိမ်များကို ဖျက်ဆီးရမ်းကား
မူဆယ်မြို့တွင် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် သီချင်းဆိုအလှူခံနေသည့် လူငယ် ၆ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
ခင်ဦးမြို့နယ်၊ မန်ကြီးတုံရွာသားတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား
ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ ရေပုတ်ကလေးကျေးရွာက ပြည်သူ ၄ ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွား
စလင်းမြို့နယ်၊ တောစိမ့်ရွာတွင် အမျိုးသမီးတဦးကို စစ်တပ်က သေနတ်နှင့်ပစ်သတ်၊ ရွာသား ၆ ဦးကိုဖမ်းဆီးသွား
ချောင်းဆုံမြို့နယ်တွင် NLD ပါတီဝင်ကို မဖမ်းမိ၍ ညီမဖြစ်သူ ဆရာမတဦးနှင့် မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ထားဝယ်၊ ရေဖြူမြို့နယ်၊ မော်ကြီးရွာတွင် လဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်သူ ၄ ဦးကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး၊ အရက်နှင့် စားသောက်ကုန်များ လုယူသွား
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဆိုင်ကယ်စီးလာသူတစ်ဦးကို စစ်တပ်ကသေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ပြီး အလောင်းယူသွား
ပင်လောင်းမြို့ပေါ်ရောက်ရှိနေသော ဖယ်ခုံဒေသခံများကို စစ်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေ
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့၊ အောင်မေတ္တာရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး လက်ပစ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ကလေးမြို့နယ် တင်သားကျေးရွာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒလန်တဦးသေဆုံး
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်က မူလတန်းကျောင်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ဖာပွန်မြို့နယ်တွင် ကျောက်မိုင်းလုပ်သားတစ်ဦး မိုင်းနင်းမိပြီး ခြေလက်ပြတ်ထွက်
ဖလမ်းမြို့က အထက်တန်းကျောင်းနှစ်ကျောင်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွား
ဖျာပုံမြို့နယ်၊ ဒေါ်ညိမ်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ဒုတိယအကြိမ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
မင်းလှမြို့၊ ရေနံပိုက်လိုင်းအောက်မှာ ချိန်ကိုက်မိုင်း ၄ လုံးတွေ့ရှိ
WHOနှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး၌ မြန်မာကိုချန်လှပ်ထားခဲ့
ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေရာများနှင့် ဘုရားကျောင်းထဲခိုလှုံသူများကို မတိုက်ခိုက်ရန် ကတ်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးများ ဥက္ကဌ မေတ္တာရပ်ခံ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ရှေ့နေများ ဖမ်းဆီးခံရသည်ဆိုသည့်သတင်း မဟုတ်မှန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိဟု ကူလအထူးကိုယ်စားလှယ်ပြော
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ယာယီအကာအကွယ်ပေးနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်
AA စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ညီအပါ ၈ဦးအမှု ဒီနေ့မစစ်ဖြစ်၊ ဇွန်၂ကိုရွှေ့
ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းက SSPP,RCSS, TNLA တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ပြီး ပြည်သူနှင့်အတူရပ်တည်ကြရန် ကမ္ဘာ့ရှမ်းလူမျိုးများကွန်ယက် တောင်းဆို
တောင်ကြီးမြို့ပြည်သူများက စစ်ကောင်စီကို ထောက်ပံ့နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံအား ရှုတ်ချသည့်အနေဖြင့် အလံမီးရှို့ဆန္ဒပြ
အင်းတော်မြို့နယ်ရှိ စာသင်ကျောင်းမီးလောင်၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ယာဥ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး သေဆုံး
အင်းတော်မြို့နယ်ရှိ စက်တောကုန်းရွာ အလယ်တန်းကျောင်း မီးလောင်ပျက်စီး
ပြည်သူအကျိုးမရှိလျှင် ရွေးကော်တာဝန်များ ထမ်းဆောင်မည်မဟုတ်ဟု ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်က ရွေးကော်တာဝန်ရှိသူများပြော
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့က ကျောက္ကာရေနံချက်ဖိုမှာ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား
စစ်ကျွန်ပညာရေးယန္တရားကို တိုက်ခိုက်မည်ဟု ပွင့်ဖြူ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြေညာ
ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာရှိ ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းဇင်သန့်၏နေအိမ် သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရ
တွန်းဇံ၊ ကျီခါးမြို့မှာ လူ ၁၀၀ခန့် COVIDကဲ့သို့အသက်ရှူကြပ်ဝေဒနာခံစားနေရ၊ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေ
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်၏ လူမဆန်မှုများကြောင့် ကျဆုံးသူ ၈၂၇ ဦး နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၄၀၈ ဦးရှိ
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း YAAS ကြောင့် ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းရှိ လူနေအိမ်ရာနဲ့ချီပျက်စီး
မုန်တိုင်းအရှိန်နဲ့ လှိုင်းကြီးမှုကြောင့် ချောင်းသာ-ရွှေသောင်ယံလမ်းပိုင်းအချို့ ပျက်စီး
NUG အစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ ထုတ်ပြန်
စစ်ကောင်စီက သတ်ဖြတ်လို့သေဆုံးသွားသော ကလေးသူငယ် ၇၀ ကျော်အတွက် နိုင်ငံတကာက အရေးယူနိုင်ဖို့ စီစဉ်နေ
မြန်မာ့သမိုင်းတလျှောက် အမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်ကို ရင်ဆိုင်နေရဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဆာဆာပြော
မတ်လအတွင်း KNU နှင့် စစ်တပ်တိုက်ပွဲများ တစ်ရာကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့၊ အရာရှိများအပါအဝင် ၁၂၈ ဦးသေဆုံး၊ ၁၈၀ ကျော်ဒဏ်ရာရ
ကချင်၊ ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာရှိ ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်နေအိမ် တိုက်ခိုက်မှု KIA တပ်သား ၄ ဦးကျဆုံး
ကနီမြို့တိုက်ပွဲ လေးရက်အတွင် နှစ်ဖက်သေဆုံးထိခိုက်မှု ဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရှိလာ
ကနီမြို့တွင် စစ်တပ်နှင့် PDF မကြာခဏတိုက်ပဲဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် ဒေသခံများ ညတွင်းချင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုများ ပိုမိုကြုံတွေ့ရနိုင်ဟု Nikkei Asia သတင်းမှာ ဖော်ပြ
မူဆယ်မြို့တွင် ယမန်နေ့ညနေက ၃ နေရာခန့် တပြိုင်နက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
သာကေတမြို့နယ်တွင် ဗုံး ၆ ကြိမ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်တပ်သတင်းပေး ရာအိမ်မှူးဖြစ်သူ ဒလန်တစ်ဦးသေဆုံး
အင်းစိန် ကညနရုံးနှင့် သင်္ကန်းကျွန်းရှိ လျှပ်စစ်မီတာရုံးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွား
မြောက်ဒဂုံရှိ ပင်လုံတံတားအနီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး ပြည်သူများကို စစ်တပ်က တားဆီးစစ်ဆေးနေ
ရန်ကုန် - မန္တလေးရထားတစီး ပဲခူးတိုင်း ညောင်ပင်သာနှင့် ကညွတ်ကွင်းဘူတာအကြား မိုင်းခွဲခံရ
တောင်ကြီးနှင့် အေးသာယာတွင် ဖောက်ခွဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း PDF ပြော
လှိုင်သာယာတွင် စစ်တပ်သတင်းပေး ဒလန်တစ်ဦးနေအိမ် ဗုံးနှစ်လုံးပစ်ခံရသော်လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိ
မြောက်ဥက္ကလာ အမှတ် ၃၉ မူလတန်းကျောင်းရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး လူ ၂ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
မန္တလေး၊ မဟာအောင်မြေ ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ဧရာဝတီတိုင်းမ်သတင်းဌာနက သတင်းထောက်တစ်ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီး ရိုက်နှက်စစ်ဆေး
ကနီမြို့နယ်၊ ကျော်ရွာရှိ နေအိမ် ၁၅ အိမ်မှ ဆိုင်ကယ်၊ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို အကြမ်းဖက်စစ်သားများ အဓမ္မလုယူ
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် စစ်သားနဲ့ ရဲများက ပြည်သူ့နေအိမ်များကို ခဲများဖြင့်ပစ်ခတ်ရမ်းကား
သာကေတတွင် စစ်တပ်ကပစ်သတ်ခဲ့သူမှာ စိတ်ဝေဒနာသည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်နက်နှင့် ဗုံးသယ်ဆောင်သည်မှာ မဟုတ်မှန်
မကွေးမြို့၊ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးကို စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်လို့ မျက်စိတစ်ဖက် ဆုံးရှုံး
ရန်ကုန်၊ တရုတ်ကုမ္ပဏီများအား မီးရှို့ခဲ့ဟု မတရားစွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံရသူ ၂၈ ဦးကို အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ စစ်ကောင်စီချမှတ်
မိုးကုတ်မြို့တွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ၂ ဦးအပါအဝင် ၇ ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
လက်ပံပျားရွာက လက်သုံးချောင်းထောင် ဓာတ်ပုံရိုက်သူ ကြက်ကြော်သည် အမျိုးသမီး ၉ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
ပဲခူးတိုင်း ဇေယျဝတီမြို့ ညသပိတ် ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခံရပြီး ပြည်သူ ၂ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ပြည်သူနှစ်ဦးကို ရဲကားနှင့်တိုက်ပြီး ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်
ပခုက္ကူ၊ CDM ဝန်ထမ်းများနှင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို လက်လုပ်မိုင်းမိသည်ဟုဆိုတာ စစ်တပ်က အမှုဆင်ဖမ်းဆီး
မန္တလေးတက္ကသိုလ်က အရာထမ်း ၂၄၅ ဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
ကရင်၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်ရှိ အခြေခံပညာရေးဝန်ထမ်း ၈၅၁ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ဘားအံတက္ကသိုက်က CDM ဆရာ/မ ၈၀ ခန့် ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
ဒီးမော့ဆိုမြို့က စိန့်ဂျိုးဆက်ဘုရားကျောင်းကို အကြမ်းဖက်စစ်သားများ ပစ်ခတ်ရမ်းကား
ဒီးမော့ဆိုမြို့မှာ အန္တရာယ်ရှိသော နေရာများ သွားလာခြင်းမပြုရန် ပြည်သူများကို KPDF သတိပေးနှိုးဆော်
ကရင်နီစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် ရိက္ခာသယ်ယူပေးနေသော လူငယ်နှစ်ဦးကို စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်
လွိုင်ကော်၊ ဘီလူးချောင်း အမှတ် ၁ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံရှိ စက်ရုံမှူးရုံး မီးလောင်ကျွမ်း
ဒီးမော့ဆိုမြို့တွင် စစ်တပ်က မကြာခဏလက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ရမ်းကားနေ
စစ်ကောင်စီ၏ အင်တာနက်ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒေါ်လာ ၂၄ သန်းကျော် နေ့စဉ်ဆုံးရှုံးမှုရှိ
စစ်ကောင်စီအပေါ် နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုများ ပိုမိုလိုအပ်နေဟု ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ပြော
စစ်ကောင်စီကို ထောက်ပံ့မှုရပ်ဖို့ Chevron စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ နယူးယော့မြို့မှာ ဆန္ဒပြခံရ
ရွှေကူမြို့နယ်၊ ကျောက်ကြီးကျေးရွာရဲစခန်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ
ကသာမြို့နယ် မိုးတားစံပြရွာ ရဲစခန်း မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား
မုံရွာမြို့ မြဝတီကပ်ကွက်က စတိုးဆိုင်တခု မီးကွင်းပစ်ခံရသော်လည်း ပျက်စီးမှုမရှိ
ကျောက်ဆည်မြို့ ဆူးကုန်းရပ်ကွက်ရှိ စားသောက်ဆိုင်တခု မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား
မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဆွေ သေနတ်နှင့်ပစ်သတ်ခံရ၊ ဇနီးသည် ဒဏ်ရာရ
စစ်ကောင်စီကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းပြီး မျက်နှာငယ်နေရဟု PPST ဥက္ကဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်ပြော
ဈေးချိုနဲ့ မန်းမြန်မာပလာဇာက မဖွင့်လှစ်သေးတဲ့ ဆိုင်ခန်းများကို စည်ပင်ကယာယီပိတ်သိမ်း
ရွှေကူမြို့နယ် PDF အနေနဲ့ ပြည်သူများထံက ငွေကြေးကောက်ခံခြင်းမရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်
ပြင်ဦးလွင် ပွဲကောက်ရေတံခွန်ရှိ ဆိုင်ခန်းများကို စစ်တပ်ကနှင်ထုတ်
မူဆယ်တွင် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် သီချင်းဆိုအလှူခံနေစဉ် ဖမ်းဆီးခံရသည့် လူငယ်ငါးဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်
ပင်းတယမီးအိမ်ရှင် ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်ကို ပုသိမ်အကျဉ်းတောင်တွင် ရုံးထုတ်စစ်ဆေး
ချီဖွေမြို့တွင် ပြည်သူ့စစ်ထဲဝင်ရန် စစ်ရှောင်စခန်းများအထိ စာရင်းကောက်ယူပြီး ဖိအားပေးစေခိုင်းနေ
ထားဝယ်တွင် မီးကွင်းပစ်ခြင်း၊ အဖျက်အမှောင့်လုပ်ငန်းများပြုလုပ်ခြင်းများ DPDF လက်ချက်မဟုတ်ဟု ထုတ်ပြန်
ကသာ - ထီးချိုင့်ကားလမ်းတွင် ဆီဘောက်ဆာတစီး တိမ်းမှောက်ပြီး မီးလောင်ကျွမ်း
မြောင်မြို့နယ်တွင် စစ်တပ်ကအင်အားထပ်ဖြည့်၊ ဒေသခံများက လမ်းပေါ်သစ်ပစ်ခုတ်လှဲပြီး ပိတ်ဆို့ထား
ဗီဇာသက်တမ်းကုန် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ဂျပန်အစိုးရက ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပေးမည်
မိုင်းဆတ်မြို့တွင် ကျောင်းလုံခြုံရေးအတွက် တစ်အိမ်တစ်ယောက် ကင်းသွားစောင့်ကြရန် မြို့နယ်ကဖိအားပေးစေခိုင်း
ဖာပွန်ခရိုင် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါများဖြစ်ပွားနေပြီ သေဆုံးမှုများရှိလာ
ကနီမြို့တိုက်ပွဲအတွင်း ပျောက်ဆုံးနေသည့် PDF အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး သေဆုံးလျက်ပြန်တွေ့ရှိ၊ ကိုယ်ဝန်နှင့် မသန်စွမ်းဇနီးသည်ကျန်ရစ်
ထီးချိုင့်မြို့တွင် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ဖွင့်ရန် ပြင်ဆင်နေသူတစ်ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
စစ်ကြောရေးတွင် စစ်သားများ၏သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ကျဆုံးသွားသည့် ကိုမင်းမင်း၏ဈာပန ကလေးမြို့တွင်ကျင်းပ
တာချီလိတ်မြို့တွင် Quarantine ဝင်ထားသူ ၉၇ ဦးထဲမှ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၄ ဦးတိုး
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပ
နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် စက်လှေနစ်မြုပ်မှူကြောင့် လူ ၁၅၀ ကျော်ပျောက်ဆုံးပြီး သေဆုံးဖွယ်ရှိ
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီယား မီးရထားဝင်းအတွင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးး ၈ ဦးသေဆုံး
ကယားပြည်နယ်တွင် KPDF နှင့် စစ်တပ်တိုက်ပွဲမှာ စစ်သား ၁၂ ဦးသေဆုံးဟု KNU ဖက်က သတင်းထုတ်ပြန်
ကယားပြည်နယ်တွင် စစ်အင်အား ၅၀၀ ကျော်နှင့် လက်နက်များ ထပ်မံဖြည့်တင်း
ရှမ်းနီတပ်မတော် SNA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် စဝ်ခွန်ကျော် လုပ်ကြံခံရပြီးသေဆုံး၊ တရားခံကို အသေဖမ်းမိ
ဒီးမော့ဆို၊ ဒေါ့ဝတီဂိတ်တိုက်ပွဲ Free Burma Ranger ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု FBR တည်ထောင်သူ ပြော
ကလေးနှင့် ဂန့်ဂေါအကြားတွင် စစ်တပ်နှင့် PDF တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကားတစ်စင်းမီးလောင်
ရွှေကူမြို့နယ် ဥဒေါင်းတောင်အနီးတွင် ဆီဘောက်ဆာတစီးကို KIA က ပစ်ခတ်ပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီး
လီဒိုလမ်းမပေါ် နောင်မီးကျေးရွာ ပြည်သူ့စစ်ကို KIAသုတ်သင်
ပူတာအိုအခြေစိုက် ခလရ ၄၆ စစ်ဗျူဟာကုန်း အဝေးပစ်လက်နက်နှင့် ပစ်ခတ်ခံရပြီး ၂ ကြိမ်ပေါက်ကွဲ
မြောင်မြို့နယ် ချောင်းဇင်းရွာမှာ စစ်တပ်နဲ့ PDF တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
မြဝတီမြို့နယ် မီးလောင်ချောင်းတံတားတွင် စစ်တပ်နဲ့ BGF ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေစဥ် ယာဥ်တစီးကိုပစ်ခတ်၊ ၂ ဦးကျည်ထိမှန်
ကချင်၊ ရွှေကူ နှင့် ကယားတို့တွင် စစ်တပ်အားဖြည့်
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့ ထွေအုပ်ရုံးနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှေ့ ဗုံးနှစ်လုံးပေါက်ကွဲ၊ တစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
မူဆယ်မြို့ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး စည်ပင်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသေဆုံး၊ တစ်ဦးစိုးရိမ်ရ
ဝက်လက်မြို့နယ် ရွာသာကြီးရွာ အထက်တန်းကျောင်းရှေ့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဗုံးများဖောက်ခွဲရမ်းကား
ချောင်းသာကမ်းခြေရှိ စာသင်ကျောင်းနှစ်ခုတွင် တစ်ညတည်းပေါက်ကွဲမှု ၄ ကြိမ်ဖြစ်ပွား
NUG & CRPH
NUG အစိုးရကို တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရေး လွှတ်တော်တွင် အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဂျပန်အမတ်များပြောကြား
CRPH ကို နိုင်ငံတကာပါလီမန်များညီလာခံ IPU က အခိုင်အမာထောက်ခံကြိုဆို
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တို့ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး
မိုးဗြဲမြို့နယ် ဆီးမီးလော့ကျေးရွာမှာ စစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီး ၉ လုံးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီး ပြည်သူတစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုတင်ထွဋ်ပိုင်ကို မဖမ်းမိ၍ မိခင်ဖြစ်သူကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီး ထောင် ၃ နှစ်ချ
လီဒိုလမ်းမပေါ်ရှိ နောင်းမီကျေးရွာနေ ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ဦးဖုန်းကျော် နေအိမ်တွင်ပစ်သတ်ခံရ
လွိုင်ကော်တွင် ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ ကလေးတစ်ဦးကို စစ်တပ်က အသေပစ်သတ်
ရှမ်းရှေ့မိုင်းဆတ် ကျောင်းလုံခြုံရေးမစောင့်သောအိမ်ကို ၈၀၀၀ကျပ်ကောက်ခံ
လွိုင်ကော်နှင့် ဒီးမော့ဆိုတွင် တိုက်ပွဲများမရှိသော်လည်း စစ်တပ်က အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ရမ်းကားနေ
ဒီးမော့ဆိုမြို့တွင် လက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးသွားသူ၏ အလောင်းအား ကောက်ယူခွင့်မရသေး
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် နတ်ကန်လယ်ရွာကို စစ်တပ်ကဝင်စီး၊ ရွာသား ၅ ဦးဖမ်းဆီးခံရ
မန္တလေးတွင် ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့ဝင်အပါအဝင် ၁၀ ဦးကျော်ဖမ်းဆီးခံရ
သထုံမြို့ မနောဖြူပရဟိတအသင်းမှ လူငယ် ၅ ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ချောင်းဦးမြို့နယ် ငါးလုံးတင်ရွာကို စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ခြိမ်းခြောက်ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီး
ထားဝယ်တွင် စစ်သားများပစ်ခတ်ရမ်းကားမှုကြောင့် ပြည်သူတစ်ဦးသေဆုံးပြီး အလောင်းပြန်မပေး
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်က ဆရာ/မ ၂၉ ဦး ရာထူးမှထပ်မံထုတ်ပယ်ခံရ
အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ မယ်ဇလီကုန်းရွာက CDM ဆရာမတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွား
CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းများကို ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများတွင် ခန့်အပ်ခြင်းမပြုရန် စစ်ကောင်စီက ဖိအားပေးနေ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနက မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိ ၇ ဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
ဘီးလင်းမြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၅၀၄ ဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
မိုးကုတ်ဆေးရုံကြီးရှိ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ဆေးရုံအုပ်က ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်မှုများပြုလုပ်နေ
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင် CDM အလယ်တန်းပြဆရာမတဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
မိုးကုတ်မြို့နယ်က CDM ဆရာ/မများကို ပညာရေးမှူးက ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်မှုများပြုလုပ်နေ
CDM ပြုလုပ်နေသော ဝန်ထမ်း ၁၃ ဦးအတွက် ဝိုင်းမော်လူငယ်များက စားနပ်ရိက္ခာများလှူဒါန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ် Non-CDM ဆရာ/မများက ကျောင်းအပ်ကြရန် နည်းမျိုးစုံနဲ့ စည်းရုံးနေ
မန္တလေး နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်က အရာထမ်း ၉၃ ဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
မုံရွာလူထုသပိတ်ခေါင်းဆောင် ဝေမိုးနိုင်ကို ယမန်နေ့က ပထမအကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေး
ကချင်ဒေသ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန် CRPH နှင့် KPICT တို့ သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုး
ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ မြင်းကကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား
ကယားပြည်နယ်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကို ကရင်နီပြည်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ KSCC က သိန်း ၉၀ လှူဒါန်း
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ မေတိုးခိုင်၊ ရဲတိုက်နှင့် ပိုင်တံခွန်တို့ကို အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးထုတ်စစ်ဆေး
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ငါးစျေးအနီးတွင် စစ်သားများကို အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အချို့က ပစ်ခတ်၊ တစ်ဦးသေဆုံးပြီး တဦးလက်ပြတ်
မိတ္ထီလာဆေးရုံကြီးရှေ့တွင် ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားပြီး ရဲတစ်ဦး ကျည်ထိမှန်သေဆုံး
မကွေးလေတပ်စခန်းတွင် တိုက်လေယာဉ်များအတက်အဆင်း ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေ
စစ်ကောင်စီက တန်ထောင်ချီသည့်တရားမဝင်သစ်များကို နိုင်ငံတကာစျေးကွက်သို့ ရောင်းချရန်စီစဉ်နေ
မန္တလေး သံဃာ့သမဂ္ဂသပိတ်စစ်ကြောင်းကို စစ်တပ်က ကားနှင့်တိုက်ပြီးဖြိုခွင်း၊ သံဃာ ၅ ပါးနှင့် ပြည်သူ ၁ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချခွင့် ပိတ်ပင်ရေး အာဆီယံ ၉ နိုင်ငံက ကုလထံကန့်ကွက်စာပို့
မန္တလေး - လားရှိုးလမ်းပေါ်မှာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ၅ ဦးဒဏ်ရာရ
မိုးကုတ်မြို့မှာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မိုးမိတ်မြို့တွင် ကိုဗစ်စစ်ဆေးရေးဂိတ် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
ပွင့်ဖြူအထည်ချုပ်စက်ရုံဝန်ထမ်းများကို ချေးငွေပြန်ဆပ်ရန် စစ်တပ်ကဖိအားပေးနေ
ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲကို ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြမည်
စစ်ကျွန်ပညာရေးစနစ် အသက်သွင်းရန် ကျောင်းများပြန်ဖွင့်နေသော်လည်း တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ ကျောင်းအပ်သူ ၁၀% သာရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့တွင် မြန်မာဘက်ပို့မည့် သေနတ် ၂၇ လက်နှင့် ကျည်ဆန် ၅၀၀၀၀ ခန့် သိမ်းဆည်းရမိ
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၄၃ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
PPST ၏ ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူကို လာမည့်အစည်းအဝေးပွဲတွင် အတည်ပြုနိုင်မည်
PPST နှင့် စစ်ကောင်စီ ဆွေးနွေးမည့်စာမှာ အစစ်အမှန်မဟုတ်ကြောင်း ABSDF ထုတ်ပြန်
လှိုင်သာယာမြို့နယ် မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုန်မှာ ယမန်နေ့ညက မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား
ရွှေကူမြို့တွင် ကျောင်းအပ်လက်ခံနေသည့် ဆရာ/မများကို ပြည်သူများက အလိုမရှိကြောင်း သံပုံးတီးဆန္ဒပြ
COVID 19 ကြောင့် ထိုင်းစက်ရုံတွင် ကွာရန်တင်းဝင်နေရသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ထောင်နှင့်ချီပြီး ဆန္ဒပြ
COVID 19 အကြောင်းပြပြီး ပြည်တွင်းလေဆိပ် ၇ ခုမှ ခရီးစဥ်များအားလုံးဖျက်သိမ်း
မင်းဘူးမြို့နယ် တောင်မန်းကျေးရွာအနီးတွင် စစ်ရဟတ်ယာဥ်တစ်စီး စက်ချို့ယွင်းပြီး အရေးပေါ်သက်ဆင်း
မုံရွာ၊ ဗောဓိတထောင်နှင့် ကျောက္ကာကြားတွင် ကားမှောက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ဘုန်းကြီးတပါးပျံလွန်တော်မူ
မြန်မာသတင်းထောက်များ တရားစွဲဆိုခံရမှု ချက်ချင်းပြန်ရုတ်သိမ်းရန် စစ်ကောင်စီကို AI အဖွဲ့တောင်းဆို
ကရင်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်များ ငှက်ဖျားကုသရန် အကူအညီလိုနေ
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်၏ လူမဆန်မှုများကြောင့် ကျဆုံးသူ ၈၃၁ ဦး နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၄၄၆ ဦးရှိ
ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက် NUG အစိုးရနှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုး
ထိုင်းနိုင်ငံက နေပါလီဂေါ်ရဂါးအဖွဲ့ချုပ်က NUG အစိုးရထံ ဘတ်ငွေသုံးသိန်းလှူဒါန်း
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြော
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူ တစ်သိန်းကျော်ရှိလာဟု ကုလသမဂ္ဂပြော
အမေရိကန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာ့အရေးထည့်သွင်းဆွေးနွေး
မြန်မာ့အရေးကူညီပေးဖို့ ဗီယက်နမ်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုက်တွန်း
Puma Energy ကုမ္ပဏီက မြစ်ကြီးနားလေဆိပ်တွင် လေယာဥ်ဆီရောင်းချမှုကို ရပ်ဆိုင်းထားမည်
ထိုင်းမှ မြန်မာသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့မှု ဘတ်ငွေ 96.5 ဘီလီယံကျဆင်းမည်
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် စစ်ကောင်စီတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်မရှိသေး
ပူတာအိုမြို့နယ်တွင် စစ်ကူရောက်လာသည့် ယာဥ်တန်းကို KIA တပ်မတော်က ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်
သာကေတမြို့နယ်၊ ဇိနမာန်အောင်ဘုရားဝင်းထဲ တပ်စွဲထားသည့် စစ်သားများနှင့် အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အချို့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
မကွေးမြို့မှာ PDF နှင့် စစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး စစ်သား ၅ ဦးသေဆုံး၊ ဒေသခံ ၃ ဦးကျဆုံး
ကန်ပက်လက်မြို့မှာ ဒေသခံတပ်ဖွဲ့များနှင့် အကြမ်းဖက်စစ်တပ် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေ
ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ကျေးရွာအချို့ကို ပစ်ခတ်ပြီး ပြန်ဆုတ်ခွာလာတဲ့ စစ်ယာဉ်တန်းကို ကလေးဒေသခုခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်
ရွှေကူ၊ ဒုတိယမြစ်ကျဉ်းတွင် စစ်တပ်ရိက္ခာနှင့် စစ်သားများပါဝင်သည့် သင်္ဘော ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရ
အလော့ဘွမ်တောင်ခြေတွင် စစ်ကောင်စီက အင်အားများဖြည့်တင်းနေ
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်က မင်္ဂလာဆောင်တခုတွင် ပါဆယ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး တစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
ကြည့်မြင်တိုင် ယာဉ်ထိန်းရုံးနှင့် လှိုင်သာယာတွင် ကင်းလှည့်နေသည့် စစ်ကားပေါ်သို့ လက်လုပ်ဗုံးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရ
မြိုင်မြို့နယ် အမှတ် ၁ ရပ်ကွက် အထက ၂ ကျောင်း မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီး ဗုံး ၅ လုံးပေါက်ကွဲ
ရွှေကူမြို့နယ်ရှိ မဏိသြဂ အထကခွဲကျောင်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား
ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၊ ကျီစုကျေးရွာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အမှတ် ၅ ရပ်ကွက်ရုံးအနီးမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ဒီးမော့ဆို စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတခုတွင် လူဦးရေ တစ်ထောင်ကျော်ရှိလာပြီး အကူအညီများလိုအပ်နေ
ဒီးမော့ဆိုမြို့ဖက်ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးများဖြင့် အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေ
လွိုင်ကော်နှင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်များတွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နှင့် စစ်တပ် တိုက်ပွဲများပြင်းထန်
လွိုင်ကော်၊ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် ရိက္ခာသွားပို့ရင်း အရပ်သား ၃ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လွိုင်ကော်မြို့အဝင်ကို ပိတ်ဆို့ထား
ဂန့်ဂေါတွင် အကြမ်းဖက်စစ်သားများက CDM ကျောင်းဆရာတဦးအပါအဝင် ၃ ဦးကို သေနတ်နှင့်ပစ်သတ်
လွိုင်ကော်၊ နာနတ်တောရပ်ကွက် ဆယ်အိမ်မှူးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်သွား
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ဆိုင်ကယ်စီးလာသူ သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်တဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က စစ်ကားနှင့်တိုက်သတ်
ရေစကြိုမြို့က NLD ပါတီဝင်နေအိမ်များကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖျက်ဆီးရမ်းကား
ပဲခူး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မှာ ပြည်သူနှစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွား
တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ ဂိမ်းဆိုင်တွင် ဂိမ်းဆော့နေသည့်လူငယ်များကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွား
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ ကြံခင်းမြို့က ရဲညီအစ်ကိုနှစ်ဦး ၃ လခန့် ထောင်တွင်း တိုက်ပိတ်ခံထားရ
ရန်ကုန်၊ သိမ်ကြီးဈေးနှင့် မင်္ဂလာဈေးတွင် ဆိုင်ခန်းမဖွင့်သောဆိုင်ရှင်များကို ပိတ်သိမ်းမည်ဟု စစ်ကောင်စီခြိမ်းခြောက်
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် အပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ်မရ
မကွေးတိုင်းအစိုးရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီး ဦးမြင့်အောင်ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွား
တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုပြည့်ဖြိုးပိုင်ကို မဖမ်းမိ၍ မိခင်ဖြစ်သူကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
မြဝတီမြို့တွင် မောင်းပြေးသည့်ဆိုင်ကယ်သမားကို စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ရာ အမျိုးသမီးတဦး ကျည်ထိမှန်
ဟိုပင်မြို့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးများနဲ့ ပစ်ခတ်နေပြီး ထိခိုက်မှုများရှိနေ
ကျိုင်းတုံမြို့တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ရိုက်နှက်ခံရပြီး ဆိုင်ကယ်လုယူခံရ
တာချီလိတ်မြို့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ လူငယ် ၂ ဦး ပုဒ်မ ၄ ခုနဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရ
ကရင်ပြည်နယ် ဆောမီးလူကျေးရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ပစ်ခတ်လို့ ပြည်သူ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် နတ်ကန်လည်ရွာက အမျိုးသား ၃ ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွား
ဟင်္သတမြို့က တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ အမျိုးသမီးတဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ရန်ကုန် အနုပညာတက္ကသိုလ်က CDM ဆရာ/မ ၃၈ ဦး ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရ
ပေါင်မြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၄၃၄ ဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက CDM ဝန်ထမ်း ၅၀၈ ဦး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
ငါန်းဇွန်မြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၄၀၀ ခန့် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
မိုးမိတ်မြို့နယ်ကCDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၈၁ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ဗန်းမော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်က CDM ဆရာ/မများ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ
တာချီလိတ်မြို့တွင် CDM ဝန်ထမ်းများကို စစ်တပ်က အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးရန်စီစဥ်နေ
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် MyTel ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများကို စစ်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေ
ခင်ဦးမြို့နယ် အိုင်ပေါက်ကြီးကျေးရွာက ကြံ့ဖွံ့ပါတီစည်းရုံးရေးမှူး ဦးအုန်းခိုင် အသတ်ခံရ
ခင်ဦးမြို့နယ်၊ ​နှောကုန်းရွာတွင် စစ်ကောင်စီခန့် ရွာတာဝန်ခံနှင့် ရွာလူကြီးတစ်ဦး ဓားနှင့်ခုတ်သတ်ခံရ
ကနီမြို့ ရှမ်းမြောင်းတွင် ရေချိုးနေသော မျိုးသမီးများအား မဖွယ်မရာပြုလုပ်ပြသည့် စစ်သားကို ရဲတစ်ဦးက သေနတ်နှင့်ပစ်သတ်
ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်သူများ မလိုအပ်ဘဲအပြင်မထွက်ရန်နှင့် အခွန်မဆောင်ကြရန် ပျောက်ကြားတော်လှန်ရေးတပ်သားများက အသိပေး
ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိဝင် နာယကကြီး ဦးလှကြိုင် ကွယ်လွန်
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးထားတဲ့ စာရေးဆရာမတူတူးသာကို အင်းစိန်ထောင်မှာ ရုံးထုတ်၊ မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်မရသေး
ထားဝယ်တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးထားသူ ၁၂ ဦးအနက် အချို့တွင် ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရ
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အဇင်းရဲစခန်းက တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေး
မိုးကုတ်မြို့တွင် ရဲကားတစီးကို ထော်လာဂျီနဲ့ ဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွား၊ ယာဥ်မောင်းဖမ်းဆီးခံရ
သရုပ်ဆောင်ပိုင်တံခွန်နှင့် ရဲတိုက်ကို Facebook ပေါ်က စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သည့် အထောက်အထားများနှင့် တရားစွဲ
ကျောက်တော်မြို့နယ် ညောင်ချောင်းကျေးရွာက စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ စားနပ်ရိက္ခာအခက်ကြုံနေ
မကွေးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်ဦးနှင့် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးနေမျိုးကျော် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ
ချန်းမောခုန်းဒေသက လစ်လပ်သွားသော နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေရာများအတွက် လူသစ်များ အဓမ္မစုဆောင်းခံနေရ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရသူ တစ်ရက်အတွင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိလာ
ပခုက္ကူမြို့တွင် မတရားဖမ်းဆီးခံရသူများ လက်နက်နှင့် မဆက်စပ်ဟု မိသားစုဝင်များပြော
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်၏ လူမဆန်မှုများကြောင့် ကျဆုံးသူ ၈၃၃ ဦး နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၄၄၇ ဦးရှိ
မင်းတပ်မြို့က စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် NUG အစိုးရက အကူအညီများပေးအပ်
NUG အစိုးရကစီစဥ်သည့် နောက်ဆုံးနှစ်ဆေးကျောင်းသားများအား အွန်လိုင်းမှသင်ကြားမှု စတင်တက်ရောက်သူ ၁၀၀၀ ခန့်ရှိ
မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ နန့်မွန်းရွာရှိ စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA တိုက်ခိုက်၊ နှစ်ဖက်အကျအဆုံးရှိ
ကသာမြို့တွင် PDF နှင့် စစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး စစ်သား ၄ ဦးသေ၊ ၄ ဦးဒဏ်ရာရ
ဖာပွန်ခရိုင်တွင် ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါးများသယ်ဆောင်လာသည့် စစ်ယာဥ်တန်းကို KNU ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်၊ စစ်ကားနှစ်စီးပျက်စီး၊ စစ်သားများ အလောင်းလာမယူသေး
ကန်ပက်လက်မြို့တွင် စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများ အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေ
ပူတာအိုမြို့နယ်၊ လုံရှာယန်နှင့် တန်ဂျာကျေးရွာအကြားတွင် စစ်တပ်နှင့် KIA တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နေ
ကသာမြို့ ရွှေငှက်ချောင်းအနီးတိုက်ပွဲ စစ်ကူဝင်တိုက်ပေးသည့် KIA ကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း PDF ထုတ်ပြန်
ဗန်းမောက်မြို့က မံထုံရဲကင်းစခန်းကို KIA တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီး
ကွတ်ခိုင်နှင့် သိန္နီအကြားမှာ စစ်တပ်နှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်
ပူတာအို တန်ဂျားရွာတွင် စစ်ယာဉ်တန်းကို KIAတိုက်ခိုက်
SNAဒုစစ်ချုပ်စဝ်ခွန်ကျော်(ခ)သံချောင်း စစ်တပ်ကလုပ်ကြံဟု SNAဆို
ထားဝယ်မြို့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က အရပ်ဝတ်ဖြင့် လာရောက်ဖမ်းဆီး၊ အမျိုးသမီး ၄ ဦးအပါအဝင် ၁၄ ဦး ဖမ်းဆီးခံ
ဘုရားသုံးဆူမြို့မှာ စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးများနဲ့ ပစ်ခတ်လို့ စာသင်ကျောင်း ၃ ခု မီးလောင်ပျက်စီး
ဒီးမော့ဆိုမြို့တွင် အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲများ မရှိသော်လည်း စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ် ရမ်းကားနေ
နမ္မတူမြို့နယ် ရေအိုးရွာတွင် စစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့ လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲပြီး နေအိမ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းများပျက်စီး
မကွေးတိုင်း အလုပ်သမားနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးမြင့်အောင်ကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ရေစ​ကြိုမြို့နယ်၊ နေရင်းကျေးရွာက CDM အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ပုဂံမြို့သစ်တွင် လူငယ်တဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပြီး အလောင်းပြန်မပေး၊ ကိုယ်ဝန်နှင့် ဇနီးသည်ကျန်ရစ်
တန့်ဆည်မြို့နယ် ကာပေါင်းကျကျေးရွာတွင် လေဖြတ်သူတဦးအပါအဝင် ၄ ဦးဖမ်းဆီးခံရ၊ စစ်တပ်က တရွာလုံးဖျက်ဆီးရမ်းကား
ခင်ဦးမြို့နယ်၊ အင်တိုင်းကြီးကျေးရွာတွင် စစ်သားများ မူးယစ်ရမ်းကားပြီး ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများ လုယက်ယူဆောင်သွား
မန္တလေး၊ NLD ဘဏ္ဍာရေးမှူးကို မဖမ်းမိ၍ သားသမီး ၂ ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီး ရွှေထည် သိန်းသုံးရာကျော်ဖိုး စစ်သားများယူဆောင်သွား
မဲဝိုင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းက တပ်သားများက ပြည်သူများကို ပစ်ခတ်ရမ်းကားနေ
မန်ကျန်းရွာက ပရဟိတပညာရေးဘော်ဒါဆောင်ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖောက်ထွင်းဝင်မွှေပြီး သိန်း ၂၀ ခန်တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းများ ခိုးယူသွား
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အမှတ် ၅ ရပ်ကွက် ရာအိမ်မှူးနေအိမ်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အမှတ် ၆ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး ကလေးတဦး ဒဏ်ရာရ
အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဘူတာရုံမှတ်တိုက်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
တောင်ကြီးမြို့၊ စစ်တပ်ပိုင် အင်းဝဘဏ်ရှေ့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
မြိုင်မြို့နယ် အထက ၂ ကျောင်း ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှု အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်ချက်ဟု တော်လှန်ရေးအင်အားစု ထုတ်ပြန်
ကညွတ်ကွင်းမြို့နယ် မြို့မစာသင်ကျောင်းအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား
အင်းစိန် ဘူတာရုံလမ်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဓာတ်ပုံရိုက်နေသည့် ချင်းလူငယ်တဦးကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
NUG အစိုးရက ချေးငွေပြန်မဆပ်ကြရန် ညွှန်ကြားထားသော်လည်း CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းများ ချေးငွေပြန်ဆပ်ကြရန် စစ်ကောင်စီက ဖိအားပေးနေ
မွန်ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက CDM ဝန်ထမ်း ၁၀၉ ဦး ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရ
မင်းတပ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲတပ်ကြပ်တဦး CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာ
ကယားပြည်နယ်အတွင်း စစ်ဘေးရှောင် ၄၀၀၀၀ ကျော်ရှိလာပြီး စားဝတ်နေရင်းခက်ခဲနေ
စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ၇၅ ဦး အစအနပျောက်ဆုံးနေဟု AAPP ထုတ်ပြန်
ဧရာဝတီတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးက ရဲနှစ်ဦး အချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး တဦးသေဆုံး
NLD နာယက ဦးဝင်းထိန်အမှုကို ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကြားဖြတ်အမိန့်ချမည်
ပအိုဝ်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စည်း၊ PNO နှင့် ဒလန်များ စစ်ကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းမှု ရပ်တန့်ကြရန် သတိပေး
တောင်ငူခရိုင်အတွင်း စစ်အင်အားတိုးချဲ့လာမှုကြောင့် ဒေသခံများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
မကွေးမြို့က ကဗျာဆရာ ရာစုသစ်နှင့် အမျိုးသားတဦး ဖမ်းဆီးခံရ
အမေရိကန်နိုင်ငံသား Frontier အယ်ဒီတာကို ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးရန် US ပြော
POSCO ကုမ္ပဏီက စစ်ကောင်စီကို အမြတ်ငွေခွဲဝေပေးမှု ပြန်လည်သုံးသပ်မည်
စစ်တပ်မိသားစုဝင် သားသမီးများ မဖြစ်မနေကျောင်းအပ်ကြရန် စစ်ကောင်စီညွှန်ကြား
မိုးကောင်းမြို့ရှိ ရွှေပန်းတိမ်ဆိုင်တခု မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား
ပူတာအို၊ မူလာရှီးဒီကြိုးတံတား စစ်ဆေးရေးဂ်တ်က ဝန်ထမ်းများ စွန့်ခွာ
တောင်ကိုးရီးယားရှိ မြန်မာစစ်သံရုံးရှေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဆန္ဒပြ
SNA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် စဝ်ခွန်ကျော်ကို လုပ်ကြံသူမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဟု SNA အတည်ပြု
စစ်ကောင်စီထံ စီးဆင်းနေသည့်ငွေကြေးများ ကန့်သတ်မည်ဟု Total လုပ်ငန်းစု CEO ပြော
ပလက်ဝတွင် ချင်းလူငယ် ၁၀ ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွားပြီး ပြန်မလွှတ်သေး
ဟားခါးတွင် အသက်မပြည့်သေးသူ ၂ ဦး အပါအဝင် ၇ ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက မတရားဖမ်းဆီးပြီး သေဒဏ်ချခံထားရသည့် ပြည်သူ ၅၀ ဦးအထိရှိ
ကနီမြို့နယ်က စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ ဆေးဝါးအကူအညီ အရေးပေါ်လိုအပ်နေ
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်က ဖမ်းဆီးခံရသူ ပြည်သူ ၁၂ ဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ
ထားဝယ်၊ ကြပ်စားပြင်နှင့် ဘုမ္မော်အဝင်တံတားများကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ပိတ်ဆို့ထား
လွိုင်ကော်မြို့နယ် လင်ဖုန်လေးကျေးရွာအနီးရှိ ဓာတ်တိုင်ပေါ်တွင် အမျိုးသားတဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံးနေ
ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ခု ပူးပေါင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်ကို တိုက်ခိုက်ရန် ဂျပန်ရောက် ရှမ်းလူငယ်များတောင်းဆို
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်၏ လူမဆန်မှုများကြောင့် ကျဆုံးသူ ၈၃၇ ဦး နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၄၈၇ ဦးရှိ
အိန္ဒိယ BJPပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးက COVID ဒုတိယလှိုင်းနောက်ကွယ် ဝာရုတ်ပါဝင်မှုရှိ/မရှိ သံသယဖြစ်ဟုပြော
weekly news နွေဦးတော်လှန်ရေး